Itekhnoloji yokuFunda ibalulekile njengoMphathi weCRM: Nazi ezinye izixhobo | Martech Zone
Itekhnoloji yokuFunda ibalulekile njengoMphathi weCRM: Nazi ezinye izixhobo
NgoMvulo, nge-18 kaJanuwari, 2021 NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 23, 2021 Katarzyna Banasik
Kutheni le nto kufuneka ufunde izakhono zobuchwephesha njengoMphathi weCRM? Kwixesha elidlulileyo, ukuba ulungile UMphathi wezoBudlelwane nabaXhamli kufuneka kwi-psychology kunye nezakhono ezimbalwa zokuthengisa.
Namhlanje, iCRM ingaphezulu komdlalo wobuchwephesha kunasekuqaleni. Kwixesha elidlulileyo, umphathi weCRM wayejolise ngakumbi kwindlela yokwenza ikopi ye-imeyile, umntu onengqondo yokuyila ngakumbi. Namhlanje, ingcali yeCRM elungileyo yinjineli okanye ingcali yedatha enolwazi olusisiseko ngendlela iitemplate zemiyalezo ezinokubonakala ngayo.
USteffen Harting, I-CMO yeNkitt
Kule mihla, iCRM ngumdlalo owahluke ngokupheleleyo. Ukufezekisa ukuthengisa ngentengiso kwisikali, umphathi ngamnye weCRM kufuneka azi iinkalo ezintathu. Oku kubandakanya uhlalutyo lwedatha, ukudityaniswa kwenkqubo, kunye nokwazi izixhobo zetekhnoloji yentengiso (kunye nesishwankathelo sabadlali bemarike abakhoyo kule ndawo).
Oku kufuna ulwazi oluncinci olunxulumene netekhnoloji. Inqanaba elichanekileyo lokuthengisa ngentengiso lomntu ofuna ukuliphumeza, olona vavanyo luphambili ekufuneka ukhulelwe.
Ukuphuculwa komntu kuhlala kubandakanya ukubeka imilinganiselo ephezulu yedatha kwiinkqubo ezisasaziweyo. Yiyo loo nto ingcali ye-automation yokuthengisa kufuneka iqonde ukuba ezi nkqubo zithetha njani kunye nokuba idatha igcinwa njani kwaye ishwankathelwe.
Kule minyaka mihlanu idlulileyo, abaphathi beCRM esidibene nabo basebenzise izisombululo ezahlukeneyo zesoftware (amaQonga okuzibandakanya kwabaThengi, amaQonga eeNkcukacha zaBathengi, iiNkqubo zoLawulo lokuKhuthaza, njl.
Kudala sinceda amaqela edijithali ukungcwaba i-hatchet phakathi kwabaphuhlisi kunye nabathengisi kangangeminyaka emihlanu ngoku kwaye into esiyiqapheleyo emva kokukhwela kumakhulu abathengi kukuba abathengisi abaphumeleleyo okanye abaphathi beCRM ngabo baqondayo itekhnoloji.
UTomasz Pindel, CEO we Kufumanise.io
Okukhona uyazi malunga netekhnoloji, kokukhona unokusebenza ngakumbi emsebenzini wakho.
Itekhnoloji ilele entliziyweni yeCRM.
U-Anthony Lim, Umphathi weCRM ePomelo Fashion
Ukuba uyayiqonda indlela isoftware oyisebenzisayo esebenza ngayo, amathuba ayo, kunye nokusikelwa umda, ungayisebenzisa ukuya kuthi ga kubuninzi benakho. Ukuba uyazi into encinci yonjiniyela, kulula ukuba uchaze kwaye uxoxe ngeemfuno zakho kunye neqela lobuchwephesha. Ngenxa yoko, unxibelelwano kunye neqela lophuhliso lisebenza ngokutyibilika ngakumbi kwaye nomsebenzi wabo usebenza ngokukuko. Unxibelelwano olungcono lilingana nokuhanjiswa ngokukhawuleza kwekhowudi yokugqibela kunye nokuchitha okuncinci kwexesha kunye nezixhobo.
Ukuba uyazi isuntswana le-SQL okanye iPython, unokugcina ixesha kwaye usebenzise imibuzo esisiseko yedatha ngokwakho. Oku kunokuba luncedo, ngakumbi ukuba ufuna into ye-ad hoc kwaye ababhekisi phambili bakho bakwindawo yokubaleka, kwaye awufuni kubakhathaza. Ukwenza izinto ngokwakho kunokukhawulezisa inkqubo yohlalutyo lwedatha kwaye uvumele abaphuhlisi bakho bagxile kwimisebenzi emikhulu ekufuneka beyenzile.
Ukwazi itekhnoloji ayisiyiyo umahluko kwakhona kuBaphathi beCRM; yaba yinto efunekayo.
Zeziphi izakhono zeTekhnoloji ekufuneka uzifunde njengoMphathi weCRM?
Kuya kufuneka wazi iikhonsepthi ezimbalwa eziphambili:
Ukugcinwa kwedatha -Igcinwa njani idatha, yintoni irekhodi, yintoni imodeli yedatha, kwaye kutheni ufuna ischema? Kufuneka nini ukufuduswa kwedatha, kwaye iindleko zayo ziqikelelwa njani?
Ukuhlanganiswa kweNkqubo -Ufanele uyazi ukuba uhambisa njani idatha ukusuka kolunye ugcino lwedatha uye komnye umsebenzi ukuze ube nakho ukucwangcisa nokwenza imisebenzi enjalo kunye neqela lakho lomphuhlisi.
Uhlalutyo -Iziseko zeeseva kunye nokulandelwa kwabathengi kwiwebhu.
Ukuhlawula kwakhona Ukuphinda ujonge intengiso kwaye isebenza njani.
Kuya kufuneka ujonge rhoqo kwimephu yendlela yabathengisi kunye nokukhutshwa kweshedyuli. Kuya kufuneka uyazi ukuba ngamathuba anjani kwaye nokuba isitaki sakho sangoku sikulungile na. Njengoko itekhnoloji iguquka, zinjalo neempawu (kunye namaxabiso) zabanikezeli besoftware abahlukeneyo.
Into elungileyo ngokwaneleyo kulo nyaka uphelileyo isenokungabi yeyona nto ilungileyo kulo nyaka, nokuba kungenxa yokuba iimfuno zakho zitshintshile okanye ngenxa yokuba kukho ezinye iindlela ezikhoyo okanye amaxabiso angcono asetiweyo. Kuya kufuneka uhlale ngaphezulu kwetekhnoloji entsha kunye nabanikezeli abatsha kwimakethi ukuze ulungiselele isitaki sakho.
Nokuba sele uzakhele isitaki sakho ngokwakho, kuya kufuneka ukhangele inkuthazo yamanqaku amatsha okanye uphinde ucinge ngokutshintshela kumthengisi wesithathu ukuba amaxabiso kwimarike ayehla kwaye akusekho nzuzo ukugcina nokuphucula isisombululo sakho.
Iziseko ze-SQL kunye / okanye iPython:
Ezi zezona lwimi zibaluleke kakhulu ezisetyenziselwa uhlalutyo lwedatha olunokukunceda ukuba ukwazi ukuqhuba imibuzo ngokwakho ngaphandle kokucela uncedo kubaphuhlisi. Ukufunda iziseko kunokukunceda ukuba unxibelelane nabaphuhlisi bakho.
Unokuzifunda phi iZakhono zeTekhnoloji?
Iqela lakho - lo ngowona mthombo wolwazi ubalaseleyo kwinkampani yakho. Abaphuhlisi bakho banolwazi oluninzi malunga nezixhobo onazo endaweni, kunye nezinye iindlela. Ngelixa besenokungazi malunga neetekhnoloji ezintsha eziphaya phaya, ngokuqinisekileyo bayazazi zonke iikhonsepthi ezisisiseko ekufuneka uyazi ukuze usebenze nabo. Ukuvuleleka kwaye ubuze imibuzo kuya kukuzisa kwisantya, ngakumbi ukuba sele uqalile ukusebenza kwesi sikhundla (okanye kule nkampani).
iincwadi -Inokubonakala ngathi yeyakudala, kodwa zikhona iincwadi ezimbalwa ezilungileyo phaya zokufunda iziseko zesoftware yeCRM kunye neCRM. Oku kunokuba yinto ekhululekileyo ukuba ufumana ilayibrari (jonga iilayibrari zeyunivesithi, ngakumbi kwiiYunivesithi zezoShishino okanye kwiNtengiso okanye kumasebe e-IT). Ukuba akunjalo, ukuba unobhaliso lohlobo (okwangoku lukhona e-USA), unokukwazi ukuboleka ezinye iincwadi ngesihloko seCRM nakwisicwangciso sakho sobhaliso.
Ulawulo lwaBathengi: iiConcepts kunye neTekhnoloji
Incwadana yeCRM: Isikhokelo seshishini kuLawulo lwaBudlelwane baMthengi
I-CRM kwisantya sokuKhanya, uHlelo lweSine: i-CRM yeNtlalontle yeQhinga le-2.0, izixhobo, kunye neTekhnoloji yokubandakanya abaThengi bakho
blog -Iibhloko ezininzi ezinikezelwe kubuchwephesha bokulawulwa kobudlelwane babathengi (CRM). Nazi ezinye zeentando zam:
Martech Zone -ICRM
Uluhlu lweebhloko ezili-8 zeCRM ezenziwe yiCapterra
Iimagazini ezikwi-Intanethi Iimagazini ezikwi-Intanethi zikwindawo ethile phakathi kweebhlog kunye neencwadi, zibonelela ngetoni yolwazi kwaye kubandakanya nababoneleli ngetekhnoloji ekhokelayo.
I-200 Kulungile yimagazini eyenziwe nguVoucherify.io ukunceda abaphathi beCRM bafunde izakhono zobugcisa eziyimfuneko. Inamanqaku achaza itekhnoloji entsha kunye neengcinga zobuchwephesha, sebenzisa iimeko ngezixhobo ezisezantsi ukuya kwezingasetyenziswanga ngokulula ngabangengobaphuhlisi, udliwanondlebe neengcali zeshishini ezabelana ngeengcebiso zazo namaqhinga ngendlela yokufunda izakhono eziyimfuneko indima.
Iiklasi ezikwi-Intanethi -Oku kuluncedo ngakumbi ukuba ufuna ukufunda iziseko zokufaka iikhowudi, i-SQL, okanye iklasi yePython kufuneka ibe lukhetho lwakho lokuqala. Zininzi izibonelelo zasimahla onokuthi ungene kuzo.
Isifundo se-SQL sabathengisi
Isakhono - iqonga lokufunda nokwabelana, linikezela ngesilingo sasimahla.
EDX - iqonga lokufunda elikwi-intanethi elinentlobo ezininzi zeeklasi zasimahla ezibonelelwa ziiyunivesithi eziphambili zehlabathi.
Indawo yedatha Ikhosi yePython.
Amava eMatrix -Ukuphononongwa ngokupheleleyo kweqonga leCRM.
ICapterra, GetApp, Isihlwele seG2 Uphononongo lwezixhobo ezahlukeneyo zesoftware, kubandakanya itekhnoloji yokuthengisa.
Iipodcasts -Ukuba uthanda ukumamela into kuhambo lwakho okanye xa usela ikofu yakho yasekuseni, iipodcast zilungile! Unokufunda into kwaye uqhubele phambili nomsebenzi wakho ngaphandle kokufuna ixesha elongezelelweyo.
I-CRM MVP podcast
I-CRM Talk podcast
Kufundwa amaxwebhu -Ungafunda okuninzi ngokufunda uxwebhu lwezixhobo ezahlukeneyo ozisebenzisayo okanye onokuthi ucinge ngokuzisebenzisa. Emva kwexesha elithile, uya kufunda uninzi lwegama elithile lonjiniyela kubo.
Inqanawa yomzila -Salesforce sisixhobo esimangalisayo sasimahla kwi-Intanethi.
Nokuba ungowuphi umthombo okhetha ukuqala ukufunda naye, okona kubaluleke kakhulu kukuqala. Thetha noontanga bakho, thetha nabaphuhlisi bakho, ungoyiki icala letekhnoloji yezinto.
Kufumanise.io Isoftware yolawulo lwenyuselo yonke-in-inye ye-API efuna inzame zomnxibelelanisi ezincinci, inikezela ngeempawu ezingaphandle kwebhokisi kunye nokudityaniswa, kwaye yenzelwe ukunika amandla amaqela okuthengisa ukuba asungule ngokukhawuleza kwaye alawule ngokufanelekileyo isigqebhezana kwaye Unyuselo lwamakhadi wesipho, ukunikezela, ukuhanjiswa, kunye neenkqubo zokunyaniseka.
Ukwazisa: Martech Zone inamakhonkco okudibana kweli nqaku.
tags: 200 okUhlalutyocapterraiqambayonyangCRMcrm kwisantya sokukhanyaIincwadi zecrmIzikhokelo zecrmcrm incwadi yesandlaUmphathi wecrmuxanduva lomphathi wecrmI-crm mvp podcastintetho crm podcastItekhnoloji yecrmcrm iwebhusayithiamava matrix amavaulawulo oludibene nabathengiUhlalutyo lwedathaukugcinwa kweenkcukachaindawo yedathaindawo ekuyiwa kuyoedxg2iqelagetappinkittmartechpomelo yefashoniPythonukubuyisela kwakhonaizakhonosqlsteffen hartingukudityaniswa kwenkquboiziseko zetekhnolojivoucherify
Katarzyna Banasik Monday, January 18, 2021 Friday, April 23, 2021
Intengiso yedijithali yobungcali kunye nomphathi wemveliso. Unomdla kulawulo lwemveliso yedijithali kunye nentengiso-yonke into ukusuka kwindlela yokwakha isoftware, iindlela zolawulo lweprojekthi, iindlela ze-UX kwizicwangciso zokuthengisa.
Idatha yokuthengisa: Isitshixo sokuma ngaphandle ngo-2021 nangaphaya kwayo
Ukufaka isicelo se-AI ukwakha iProfayili yokuthenga egqibeleleyo kunye nokuhambisa amava aBucala